Exposure Relationship အင်တာနက်မီဒီယာ Sma State ရှိဆယ်ကျော်သက်များ၌အခမဲ့လိင်အပြုအမူနှင့်အတူမီဒီယာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် (၂၀၁၈) - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်မှု
Sma ပြည်နယ်ငါပါစီ SEI Tuan တစ်နှစ်တာ 2015 (2018) ခုနှစ်တွင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အခမဲ့လိင်အပြုအမူနဲ့အတူထိတွေ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကအင်တာနက်မီဒီယာ
Setiawati, Irka ။
“ HUBUNGAN PA PARANMEDIA INTERNET DENGAN PERILAKU သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် BEBAS PADA REMAJA DI SMA NEGERI IPERCUT SEW TUAN TAHUN 2015 တွင်ရှာဖွေသည်။ ”
Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda2မရှိ။2(2018) ။
ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအဓိကပြproblemsနာများမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာသို့မဟုတ် TRIAS KLASIK (လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုမမျှော်လင့်ဘဲကိုယ်ဝန်၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းမတိုင်မီလိင်)၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ၊ ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်လူမှုရေးမီဒီယာများအသုံးပြုလေ့ ယူအက်စ်အေ၊ အင်္ဂလန်နှင့်Australiaစတြေးလျနိုင်ငံများတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများအရ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၁၃ မှ ၁၇ နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက် ၄၀ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးယောက်ျားလေး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်မိန်းကလေး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရွယ်တွင်ဖြစ်သည်။ ၁၆။ ဤလေ့လာမှုသည် SMA Negeri I Percut Sei Tuan ရှိလူမှုမီဒီယာနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုသိရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ လူ ဦး ရေမှာ SMA Negeri 2013 Percut Sei Tua ရှိကျောင်းသားများဖြစ်ပြီးနမူနာ ၁၁၄ ဦး ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနမူနာရိုးရှင်းသောကျပန်းနမူနာခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ Chi square စမ်းသပ်မှုမှလေ့လာမှုရလဒ်အရအကြိမ်ရေ၊ ကြာချိန်၊ ညစ်ညမ်း site နှင့် social media သည် Pvalue <2009 နှင့်အခမဲ့လိင်အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မှုနှင့်အတူ multivariate စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှုနှင့်အခမဲ့လိင်အပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှုရှိကွောငျးဖျောပွပါ။ အများဆုံးလွှမ်းမိုးသည် p တန်ဖိုး 40 <50 နှင့်သက်တမ်းဖြစ်သည်။ အကြီးမားဆုံးရမှတ် Exp B သည် ၄၅၉၄၉ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် hipothesis ကိုလက်ခံသည်ဟုနိဂုံးချုပ်နိုင်သည်။ အခမဲ့လိင်အကြောင်းပိုမိုအကြံပေးပေးရန်ကျောင်းသို့အကြံပေးသည်။ သူတို့ကိုအခမဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှကာကွယ်ရန်အစဉ်မပြတ်ပေးသင့်သည်။
keywords: အင်တာနက်ကို Exposure; အခမဲ့လိင်အပြုအမူ; ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်။
APJII ။ (2014) ။ Pengguna အင်တာနက်ကို di အင်ဒိုနီးရှား Tahun ။ http://www.apjii.or.id/read/content/info-terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014 di Akses tanggal 01 juni 2014 ။
BKKBN ။ (2014) ။ Remaja Perilaku Seks Bebas Meningkat ။ http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1761.Diakses tanggal 12 agustus 2014 ။
Chandrataruma, အမ် (2009) ။ Facebook မှာ lebih Banyak Manfaat ။ http://teknologi.vivanews.com/read/62481 ရရှိနိုင်ပါ။ Diakses 25 စက်တင်ဘာလ 2013 ။
Fatimah ဘ (2013) ။ လူမှုရေးသိပ္ပံ Surabaya ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်၏ဌာနများတွင်ကောလိပ်ကျောင်းသားများဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူ။ Surabaya: Jurnal ကယ်, အသံအတိုးအကျယ် 05 nomor 01 tahun 2014 ။
Framanik ။ (2012) ။ Ilmu Komunikasi ။ http://ilmukomunikasi.co.id/2008/02/sor-theory.html diakses tanggal 08 Agustus 2012
Geldard ။ (2012) ။ Konseling Remaja, Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko ။ Yogyakarta: Pustaka Belajar ။
Hadi အမ် (2009) ။ Facebook မှာ untuk Orang Awam ။ Palembang: Maxicom ။
Happinasari O. (2011) ။ Hubungan antara Frekuensi Interaksi dengan မီဒီယာ Pornografi terhadap Perilaku Seks Remaja Pada Siswa Kelas ရှီ Di Sma Negeri4။ Purwokerto: Jurnal Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto ။
Hesarika အေ (2010) ။ Gambaran Keterpaparan Pornografi dan Perilaku Seksual Siswa di SMA AL-Azhar Medan ။ Skripsi ။ Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ။
Hidayat AA ကို (2011) ။ Metode Penelitian Kebidanan dan Tehnik Analisis Data ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျကာတာ: Salemba Medika ။
Horrigan ဂျွန်ခ (2002) ။ နယူးကအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ: သူတို့ကသူတို့ကမအဘယ်အရာကိုအွန်လိုင်း, နှင့် '' Net ကရဲ့အနာဂတ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသလားအဘယျသို့ diakses tersedia pada http://www.pewinternet.org/pdfs/New_User_Report.pdf, 8 စက်တင်ဘာလ 2008 tanggal
Kirana ဦး, Yusad Y ကို, dan Mutiara အီး (2014) ။ Pengaruh Akses situ Porno dan တေမန်မြို့ Sebaya terhadap Perilaku Seksual Remaja di Sma Yayasan Perguruan Kesatria Medan Jurnal Kesehatan 2014 ။ Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas ဆူမားတြား Utara ။
Kristo, ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (2013) ။ Posisi အင်ဒိုနီးရှား di Percaturan Teknologi Dunia, http://www.inet.detik.com/ အင်ဒိုနီးရှား-dipercaturan- teknologi-dunia,5စက်တင်ဘာလ 2013 diakses ။
Littlejohn, အက်စ် (2002) ။ လူ့ Communi-စုံလုံ၏သီအိုရီများ။ ယူအက်စ်အေ: အစုလိုက်တန်ဖိုးရှိ။
Masunah ဂျေ (2012) ။ ပရိုဖိုင်းကို Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Remaja Kota Bandung: Masalah dan Alternatif Solusinya.http: //www.bkkbn.go.id/litbang/pusdu/Hasil ။ Kota Bandung Masalah dan Alternatifnya.pdf ။ Bandung: LPPM Universitas Pendidikan အင်ဒိုနီးရှား။ di) tanggal 11 ဇန်နဝါရီလ 2013 akses ။
Mirron တစ်ဦးက, G dan Miron ကို C, D ကို။ (2002) ။ Bicara Soal Cinta, Pacaran dan Seks kepada Remaja ။ ဂျကာတာ: Esensi Erlangga Group မှ။
မီယာဇာကီ dan ဖာနန်ဒက်ဇ။ (2001) ။ မီဒီယာသစ်: Theo-ries နှင့် Digitextuality ၏အလေ့အကျင့်။ ဗြိတိန်: Routledge ။
Muadz MM (2009) ။ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi ။ ဂျကာတာ: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi ။
Ruspawan ။ (2013) ။ Sikap Remaja Sehubungan မီဒီယာ Pornografi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja ။ Denpasar: Jurnal Penelitian Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan ။
Samino ။ (2012) ။ Analisis Perilaku Seks Remaja SMAN 14 ဘန် Lampung 2011 ။ Lampung: Jurnal Dunia Kesmas Volume ကို 1 ။ Nomor4။
Seisha ။ (2013) ။ Bahaya Pornografi bagi Remaja https://wordpress.com/just-about-life// Diakses tanggal 01 juni 2013 ။
Suryoputro တစ်ဦးက, Shaluhiyah Z ကို dan က Nicholas ။ (2006) ။ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi ။ Jurnal Makara Kesehatan, Vol ။ 10 အမှတ် 1 juni 2006 ။ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang ။
Susan C. Herring ။ (1996) ။ ကွန်ပျူတာ-mediated ဆက်သွယ်ရေး: ဘာသာဗေဒလူမှုရေးနှင့် Cross-ယဉ်ကျေးမှုပတ်သ က်. ။ အမ်စတာဒမ်: ဂျေဗင်္ယာမိန်။
Susilana R. (2009) ။ မီဒီယာ Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian ။ Bandung: Wacana prima ။
Syar အက်ဖ် (2013) ။ မီဒီယာ Sosial ။ http://id.wikipedia.org/ ။ di tanggal 12 Mei 2013 akses ။
Wahyuni ​​ni (2014) ။ Komunikasi Massa ။ Edisi cetakan ငါ Yogyakarta: Graha Ilmu ။
Walgito ။ (1999) ။ Pengantar Psikologi Umum.Yogyakarta: Andi အဘိဓါန် offset ။
Wallmyr, G. အ, dan Welin, C. (2006) ။ လူငယ်, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, နှင့်လိင်: Source ပြီးတော့သဘောထား။ ကျောင်းသူနာပြုဂျာနယ်။
Wicaksono အေ (2009) ။ Pengaruh Informasi ကို Global ။ https: // pengaruh informasi global.wordpress.com ။ di tanggal 12 စက်တင်ဘာလ 2011 akses ။
Widjaja, HA (2000) ။ Ilmu Komunikasi: Pengantar Studies ။ ဂျကာတာ: Rineka Cipta ။
Wiknjsastro, အိပ်ချ် dkk ။ (1999) ။ Ilmu Kandungan ။ ဂျကာတာ: Yayasan Bina Pustaka ။